1. Product Hordhac ah galvanized Ku marooji Pin Bow Biro Naar G209
Size: 3/16 "2 1/2"
Load shaqeynta xaddidan: 1 / 3t in 55T
Waxyaabaha: steel kartoonka (45 # steel jirka, 40Cr for pin)
Dusha: galvanized, dhex Hot galvanized, rinji, Farsamada galvanized, Daromet iyo kuwa kale
Been Abuurtay iyo kulayl lagu daaweeyaa
factor Safety: 1: 4 ama 1: 6
Ku haboon isticmaalka qaadeen
2. faahfaahinta Product ah Galvanized Ku marooji Pin Bow Biro Naar G209
Item: Galvanized Ku marooji Pin Bow Biro Naar G209
Nooca: US Type
Waxyaabaha of Galvanized Ku marooji Pin Bow Biro Naar G209,jirka waa 45 # steel, pin waa 40Cr
Size ee Galvanized Ku marooji Pin Bow Biro Naar G209:ka 3/16 "2 1/2"
Load shaqeynta yar oo Galvanized Ku marooji Pin Bow Biro Naar G209:1 / 3t in 55T, 85T ee size waaweyn iyo 120T sidoo kale Bu bixisey karaa
Technology of celiyaan, waxa aadna been abuurtay iyo Qunenched Oo hagaajiyey
Dusha for galvanized Ku marooji Pin Bow Biro Naar G209: galvanized, dhex Hot galvanized, rinji, Farsamada galvanized, Daromet, Powder dahaarka leh, rinji iyo kuwa kale
MOQ: 1000 gogo '
Capacity Production of celiyaan: 3 Weelasha bil kasta
tayo sare leh, qiimaha tartanka iyo adeeg wanaagsan. Macaamiisha 'baahida gaarka ah waxaa soo dhaweeyay
3. Xidhmada iyo maraakiibta oo ka mid ah Galvanized Ku marooji Pin Bow Biro Naar G209
Xirxiraan for galvanized Ku marooji Pin Bow Biro Naar G209 : Size The Of sariirtaada A Ma 1.05 * 0.9 * 1, Oo 60CTNS, Hantaaqaymaha Or Laba Orin Fuustada Per sariirtaada Or Case Wooden.
Shippment for Galvanized Ku marooji Pin Bow Biro Naar G209,by markab ama diyaarad
Shuruudaha Payment: 30% lacag hormaris ah ama LC
Waqti Delivery for celiyaan: 30 maalmood gudahood, waxay ku xiran tahay tirada
Dekedda Load ee china: dekedda Qingdao ama dekedaha kale
4. Shirkadda Hordhac
Qingdao Rui De Tai Birta Products Co. Ltd waa shirkadda in inta badan sameeyo waxyaabaha isdabamarinta. Waxaan ku takhasusay isdabamarinta kala duwan, sida Biro Naar ah , turnbuckles, galalka Load, qabsatooyinkooduna, handarraabbadeedii indhaha iyo nuts, clips Xadhig silig, thimbles, barroosin, dhaqso qabatooyin, silsilad barroosinka, clamps iyo isdabamarinta ahama. Dhanka kale, waxaan qaadan karto ganacsi processing sida ay sawiro, shaybaarka iyo qalabka bixisey by macaamiisha.
Workshop of Galvanized Ku marooji Pin Bow Biro Naar G209
Baaritaanka ka hor shixnad (wax Test, dusha sare iyo load ku koobnayn oo shaqo) ee Galvanized Ku marooji Pin Bow Biro Naar G209
5.What aan samayn karnaa waa sida soo socda:
♦ Response Quick:
Reply aad baaritaan ama wax su'aalo ah ee 24 saac ka shaqeeya.
♦ Full Ingiriisi Adeegga:
shaqaalaha khibrad jawaabaan su'aalaha oo dhan ee xirfadeed iyo si fiican ugu Ingiriisi
Kartoo size, dhererka iyo design ayaa la heli karaa.
♦ Creative Solutions One-Stop:
xal Exclusive oo gaar ah ayaa la bixin karaa in macaamiisha by our injineerada si fiican u tababaran oo aqoon leh.
Good adeeg-iibka ka dib, caawimaad macaamiisha si ay u xalliyaan masalooyin oo ku saabsan adeega fog products.Provide.
dadka QA Professional dhigi kormeer adag ka hor inta shixnad.
FAQ ku saabsan Qingdao Rui De Tai Birta Products Co. Ltd
S: Muddo intee le'eg yahay waqtiga dhalmada aad?
A: Guud ahaan waa 5-10 maalmood haddii alaabtu tahay in stock. ama waa 15-20 maalmood haddii alaabtu tahay ma in stock, waxaa sida ay tirada.
S: Waa maxay shuruudaha lacag bixinta?
A: Payment <= 1000USD, 100% ka hor. Payment> = 1000USD, 30% T / T ka hor, dheelitirka hor shippment.
S: Ma waxaad tahay warshad ama shirkad ganacsi ah?
A: Waxaan nahay warshad diiradda on hardware isdabamarinta sannado badan. waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ah caddibaad, handarraabbadeedii indhaha iyo nuts. turnbuckles, clips Xadhig silig, qabsatooyinkooduna iyo galalka load, ka dhigi alaab cusub sida ay sawir macaamiisha ama saamiga.
S: Sidee ayaad ku xakamayso tayo leh?
A: First, xulashada wax cayriin oo tayo sare leh ka warshad birta wanaagsan.
Second, si buuxda u soo saaray sida uu habka caadiga ah oo looga baahan yahay imtixaanka.
Macaamiisha Qaaliga ah:
Ku soo dhawow booqo website iyo rajaynaynaa in aad waxyaabaha our ka dhergin doonaa.
Waxaan fekeraan si hal abuurnimo iyo soosaarka si hufan si ay ula kulmaan aad needs.And helno warshad gaar ah oo R & D Center.
Waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ah caddibaad, handarraabbadeedii indhaha, clips Xadhig silig, galalka load, turnbuckles, qabsatooyinkooduna u qaadeen, links xira, swivels iyo alaabooyin badan isdabamarinta kale.
Just hoos u dhigi nololeedkaaga si dhakhso ah oo wuxuu ku raaxaysan waxyaabaha our.
Your si daacad ah,
Galvanized Ku marooji Pin Bow Biro Naar G209 baarka waa u bilaash lacag.
Sales Professional online in ay ka jawaabaan su'aalahaaga waqtigii 12 saacadood gudahood.
Fadlan ha ka waaban inaad nala soo xiriir wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan ku shubatay qaadayso Bolt barroosinka Shackles.Warmly idinku soo dhoweyno booqo warshad! Rajaynaynaa in aan samaysan karta wadajir benefically xiriirka ganacsi.
Welcome si ay u iibsadaan iyo jumlada our iibinta kulul fur galvanized qaanso pin Biro Naar g209. Waxaan nahay mid ka mid ah soo saarayaasha waxyaabaha ugu xirfadeed oo keentay isdabamarinta iyo ganacsatada. Fadlan si xor ah u saamiga free naga hesho oo xiriir warshadda for info dheeraad ah.
Previous: Crosby dejinta abuurtay Maraykanka Nooca Turnbuckles isdabamarinta la Hook oo Eye Waayo qaadaan
Next: 316 ama 304 ahama Steel U handarraabbadeedii masaxaada iyo Loos
Shubatay celiyaan Cabirada
Shubatay Safety Biro
Qaloocin Biro Naar isdabamarinta
3/8 Clips Xarig G450 HDG US Nooca dejinta abuurtay Wire
Ahama barroosinka ay ishu
A2 AISI304 ahama Steel JIS1169 Eye Loos
Yellow simbiriirixan Eye galvanized Hooks 324
Dhafnaa Shank Hooks 319